Ukugcoba ngezipikili ukukhulisa: izitayela eziyinhloko ekwakheni izandiso zezinsipho ngesithombe
Izipikili ezikhangayo, ezihlotshiswe ngomklamo wemfashini, zizoba ngempumelelo yokugcwalisa isithombe esinobuhle nesimnandi. Njengoba abesifazane abaningi banamuhla bengenaso isikhathi esiningi sokusebenzisa ukuvakashela ubuhle be-beauty salon, bakhetha ubuciko be-nails obusebenzayo nokuphikelela. Ukwakha yisisombululo esiphelele sabesifazane abakhuthele nabamabhizinisi.
Izipikili ze-Gel zenziwe ngamathanga amancane
Okuhluka kakhulu kungaba nezandiso zezipikili: esithombeni ongahlola izixazululo ezivame kakhulu nezifanelekile. Ungacabangi ukuthi lobu buchwepheshe bukuvumela ukuba uthole amapuleti amade kakhulu kakhulu. Izitayela zanamuhla zigxile ekwakheni umphumela wemvelo wesitayela. Muva nje, ekugcineni kwemfashini, umuthi omncane. Wamangazwa ukuhluka kwawo kwendlela yokwakheka kwe-nail. Okufanele kakhulu:
Amathuba amaningi neminye imihlobiso engakwazi ukufeza ngokuphumelelayo ubuciko be-nail.
Encwadini! Izinkathi ezimbalwa zokugcina ezenzakalweni ze-lace motifs, ongazizama ngazo izipikili ezide nezifushane.
Esikhathini esithombeni ungabona ukuthi ukuthambekela okuhlukile ekuklanyeni kwe-manicure. Okokuqala kubalulekile ukuqaphela ifomu. Lawa angama-almond-shape, rounded rounds and versions "soft" izinguqulo.
Izipikili ezixutshwe ngejel. Imiklamo emihle ingatholakala ngenxa:
mnene, imihlobiso yemifino ehlelekile njalo, eyenziwe ngesandla noma esebenzisa i-thermo-stickers;
i-filigree lace motifs;
imibala engabonakali ephathekayo;
Amaphethini angahluka kakhulu. Emapulangwe amancane, cishe noma yimuphi umdwebo ubheka inhle, inhle futhi ihlanjululwe.
Abaqambi batusa ukuba benze umquba womzimba usebenzisa ama-shadow shades. Namuhla ngemibala yemfashini efana nalokhu:
I-pink epholile, ekhumbuza ama-marshmallows amnandi;
Kunconywa ukuthi usebenzise ama-lacquers ngokuthungwa kwe-matte. Okungathandwa kakhulu yizinguqulo zensimbi zesiliva, ithusi negolide, ezihlaba umxhwele kakhulu i-geometry yesigcawu se-nail.
Ijacket ehlutshiwe: izithombe zezisombululo eziphezulu
Ukuze uthole abahlakaniphile izixazululo ezihlakaniphile, eziyinkimbinkimbi ibhatshi laseFrance elihlelekile linikezwa. Ngokungajwayelekile wanikeza umuthi womfashini waseFrance ngezipikili. I-Neil-art ikuvumela ukuba uyengeze:
izithombe ezenziwe ngesandla.
Nakani! Ama-stylists anconywa kakhulu ukuba ahlole ubuciko be-nail. Imiphumela emihle kakhulu ingatholakala ngosizo lwama-crystals, okuzokwazi ukuhlangana ngeso lengqondo kunoma yimuphi umfanekiso wesifazane.
Kunconywa ukuklama umklamo wangempela wesixazululo esinjalo ngesiza "ngamatshe". Ungabenza ngezinsika zombala noma ama-bouillon. Isithombe esinjalo sokuqala, esibekwe iminwe eminingana, sizokwenza ubuciko be-nail abuyinto encane, obukhulu futhi obukhanyayo.
I-manicure ephathekayo yesiFulentshi ngezipikili ezibanduliwe
Ijajethi enkulu kakhulu eFrance ihluke kakhulu: ukuhlolwa okuhlukahlukene nge-shades nokuhlobisa kungacatshangelwa esithombeni. Amaphethelo epuleti akudingeki ukuthi abe ngombala omhlophe. Namuhla, ungakwazi ukuklama lo mdwebo usebenzisa i-lemon, i-pink, i-turquoise, i-azure, i-orange, ebomvu. Ikakhulukazi yokuqala futhi ngokungalindelekile ibheka le nguqulo yobuciko be-nail ngokusetshenziswa kwamathoni amnyama. Lokhu kuyindlela enhle, enesibindi, engavamile, engabizwa ngokuthi yonke indawo, njengoba ihambisana ngokuvumelana nanoma iyiphi inhlangano yabesifazane.
Ayikho ethandwa kakhulu ijaji laseFrance elisha. Lo mkhuba ubaluleke kakhulu ezinkathini eziningana futhi awuhlose ukuveza ukuthandwa kwawo kwezinye izinguqulo. Lesi simiso sombala sikhangisa ubuhle bayo, ubuhle, ukulula. Ukumomotheka noma i-crescent kudonselwa phansi kwepuleti. Ungakwazi ukwengeza isixazululo esinjalo ngokudweba amachashazi, izinwele, amaphethini, imidwebo yobuciko, isobho, ukukhanya, izitika kanye nezithombe ezikhethekile.
Encwadini! Ekhuluma ngomklamo, awukwazi ukungazinaki inyanga yomzimba, kodwa u-ombre. Ukwehlukaniswa kwama-hues kungaba kokubili okuqondile futhi okugxilile.
Njengoba kubonakala, umquba wesiFulentshi ngezipikili uphazamisa ukuhluka kwawo: izithombe ezingenhla zibone izihumusho lapho ipuleti ifakwe kukho ithoni eyodwa, futhi uhlangothi luhlukile. Kuvela ubuciko bokuzikhohlisa obubukhali, obunesibindi futhi bokuqala bekhoyili. I-build-up ivula amathemba amaningi, okukhethwa kuzo kuxhomeke ngenkathi, imizwelo, isithombe kanye nezinye izinto.
Susa i-cuticle ekhaya
Ukuhlunga kwamanzi okuthakazelisayo: izimfihlo, ubuchwepheshe, imibono
Izipikili ezingamanga - incwadi yokuzifundisa
I-pedicure efanele ekhaya
I-Cutlets evela ku-ukholifulawa
Indlela yokukhetha isilwane ingane
I-Poster yeSuku Lwase-Valentine: umqondo wokudala iphephandaba lesidonga esikoleni
Ukususa ama-calluses - zokupheka ngobuhle bezandla zakho
Khulisa i-phlox kahle
UMaxim Vitorgan wakhuluma ngesimilo senkosi encane
Tattoo, microblasting, ukupuniza? Indlela yokuthola amashiya aphelele: amasu amathathu wokulungiswa, ama-pluses namaminithi
Izindlalelo ze-Autumn ezivela emakethe wempahla-2015: Izicathulo
Indlela yokutshela ingane ukuthi yamukelwa
Indawo yokudlala: isikole sokuxhumana